soo cabashadaada iyo guddiga madax-banaan - buug-yaraha macaamiisheena (Somali)
waxaa ku jiro qaybtaan
markii aad u cabatay bangigaaga, shirkad caymis ama hay'ad dhaqaale " laakiin weli aadan ku qanacsaneyn?
maxay tahay waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan qabto?
maxaa xigi doona taas?
sidee garsooruhu u xallin doonaa cabashadayda?
muddo intee le'eg ayey qaadanaysaa?
ma jiraan xaddidaadyo xagga waqtiga ah oo ku saabsan cabasho u geynta garsooraha?
cabashadayda qof kale ma ii matali karaa?
miyaan u baahnahay talo bixin takhasusle markii loo geynayo cabashada adeegga garsoorka?
cabasho geynta Adeegga Dhaqaale ee Garsooruhu ma waxay la mid tahay sidii adoo maxkamad aadaya?
adeegga Garsooruhu gacan maka geysan karaa cabashooyinka ka yimaada meheradaha yar yar?
adeegga garsoorku ma ciqaabi karaa ama ganaaxi karaa meheradaha?
home » help with this site » information in different languages » buug-yaraha macaamiisheena
soo cabashadaada iyo guddiga madax-banaan
- buug-yaraha macaamiisheena
Garsooruhu wuxuu leeyahay awoodo rasmi ah oo uu ku xalliyo cabashooyinka u dhexeeya adiga iyo hay'adda ganacsi ee aadan hawsheeda ku qanacsaneyn.
Waxaan eegnaa xaqiiqooyinka jira, su'aalo weydiin sameynaa isla markaana go'aan ka gaadhnaa wixii dhab ka ah kiiska shakhsi kasta uu wato.
Haddii ay nala noqoto in hay'adda ganacsi kuula dhaqantay si caddaalad ah, waxaannu kuu sheegi doonnaa sababta ay ku dhacday. Laakiin haddii aan isku raacno in hay'addu wax khaldan ay sameysay, waxaan ku amri kareynaa inay isi saxaan.
Adeeggayagu waa u bilaash isticmaaleyaasha adeegga.
Xaashidaan warsidka ahi waxay kuu sheegaysaa waxyaabo badan oo ku saabsan garsooraha iyo sida aan u isticmaalno awoodahayaga si aan ugu xallino cabashooyinka xagga dhaqaalaha ah.
Sanad walba waxaa nala soo xiriira in ka badan malyuun qof oo ka cabanaya dhibaatooyin dhaqaale oo ku lug leh:
bangi wax dhigashada
guryaha deynta lagu qaato
kaararka amaahda iyo kaararka istoorrada
deymanka iyo amaah qaadashada
kaydadka iyo maal gashiyada
amaah ku gadashada alaabooyinka iyo dilaalnimada
talo bixin dhaqaale
saami beddalka qalab, saamiyada, wakiilashada iyo curaarta meel la dhigto.
Haddii aadan hubin in aan kaa caawin karno dhibaatada ku haysata ee gaarka kuu ah, nala soo xiriir uun isla markaana wax na weydiiya. Naga soo waca taleefanka ah 0300 123 9 123.
Haddii aad ka walaacsan tahay qiimaha ku baxaya soo wicitaankayaga, annagaa ku faraxsan inaan dib kuu soo wacnee na soo wac.
Ka hor intaynaan dhibaatadaada guda gelin, isku day inaad adiga laftaadu xal kala gaadho hay'adda aadan hawsheeda ku qanacsaneyn.
Haddii ay kugu adkaato taas qabashadeedu, ama shaki kaaga jiro wax uun, fadlan nala soo xidhiidh.
Hay'adda ganacsi siddeed toddobaad ayey u haysataa inay ku xalliyaan cabashda iyaga iyo adiga u dhaxeysa. Haddii sided toddobaad ka dib weli aadan ku qancin sida wax u socdaan, waad na soo weydiisan kartaa inaan soo dhex galno. Waxaan kuu sharrixi doonnaa waxa aad qaban doontid ee xita taas. Naga soo wac taleefanka ah 0300 123 9 123.
Haddii hay'adda ganacsi siddeed toddobaad la siiyay waxna aysan qaban welina aadan ku qanacsaneyn, waad na soo weydiisan kartaa inaan soo dhex galno amuurtaas.
Haddii ay nala noqoto inaan caawin ka geysan karno, waxaan u baahan doonnaa macluumaad badan oo aan kaa helno adiga looguna baahan yahay foomkayaga cabashooyinka.
Waxaan ku weydiin doonnaa:
wax xoogaa faahfaahin shakhsiyadeed ah
lambarka xisaabtaada bangi ama lambarrada qorshaha aad gashay iwn
faahfaahin kooban oo ku saabsan wixii dhacay iyo sidaa aad is leedahay wax baa kuugu hagaagaya adiga.
Haddii aad na soo wacdid innaga, waan kaaga buuxin karnaa qaar ka mid faahfaahinta foomkayaga cabashada.
Ama foomka waxaad kala soo bixi kartaa boggayaga internetka. Soo buuxi ka dibna noo soo dir annaga.
Waan qabatimi karnaa habka aannu kuula xiriirayno adiga, taas oo ku xirnaan doonta baahiyahaaga.
Haddii aad ku doonaysid macluumaadka qaab kan ka duwan sida farta indhooleyaashu wax ku akhriyaan, daabacaad ballaadhan ama cajalad dhageysi " ama luqad tan ka duwan " noo soo sheeg. Sida ugu wanaagsan ayaan kuu caawin doonnaa.
Haddii cabashadaadu tahay mid aan wax ka qaban karno,waxaannu:
eegi doonnaa sheekada dhinaceeda adiga ah
waxaan la xiriiri doonnaa hay'adda ganacsi si aan iyagana uga helno sheekada dhinacooda
miisaan saari doonnaa xaqiiqooyinka jira isla markaana
u sheegaynaa adiga hay'adda ganacsi sida ay nala tahay.
Haddii ay nala noqoto in hay'adda ganacsi kuula dhaqantay si caddaalad ah, waxaannu kuu sheegi doonnaa sababta ay ku dhacday.
Haddii ay nala noqoto in hay'adda ganacsi kuula dhaqantay si khaldan isla markaana aad khasaartay, waxaan ku amri karnaa inay arimaha saxaan oo ay ku hagaajiyaan.
Cabashooyinka badankood heerkaan ayaan ku xallinaa. Haddii lagu hallin waayo, Dib ayaan u eegnaa cabashada isla markaana waxaan kuu sheegi doonnaa go'aankayaga kama dambaysta ah.
Taa macnaheeduna ma ahan inaad iska aqbashid go'aankayaga oo waxaad xor u tahay inaad maxkamad aaddid halkii aad nooga imaan lahayd. Laakiin kuma siin karno talo bixin xagga sharciga ah oo ku saabsan waxyaabaha lagaaga baahan yahay maxkamadaha iyo wixii xakamayn ah (tusaale ahaan, xadidnaanta xagga waqtiga ah).
Kiis walba si taxaddar leh ayaan u eegnaa " isla markaana waqtiga ay qaadaneysaa waa kala geddisan yahay. Waxay ku xirnaan kartaa:
sida kiisku u adag yahay iyo
inta ay nagu qaadato annaga sidaan ku helaynno macluumaadka aan u baahanno, si aan u gaarno gunta cabashadaada.
Taa macnaheedu waxaa weeye inaan ku xallin karno cabashooyinka qaarkood muddo ku kooban bilo yar. Laakiin qaarkood waxay qaataan sanad wax sii dheer.
Haa. Haddii aad la xallin weydo cabashadaada hay'adda ganacsi baf ahaantaadu, waxaa muhiim ah inaad noogu keentid annaga sida ugu dhakhsaha badan ee macquulka ah. Waxaad u haysataa taas ilaa lix bilood inaad ku keentid.
Xaddidaadyo kale oo xagga waqtiga ah ayaa sidoo kale jiri kara haddii:
waxaad ka cabanaysaa ay dhaceen waqti hore iyo/ama
markii aad iska dhaaftay muddo dheer inaad cabatid ka dib markii aad ogaato (ama aad ogeydba) in dhibaato jirto.
Qof kale waa kuu metali karaa cabashadaada " tusaale ahaan, xubin qoyskaaga ka tirsan, saaxiib ama Hay'adda Talo Siinta Muwaadinka. Laakiin weli waxaan kaaga baahan doonaa inaad saxiix ku dhufatid foomkayaga cabashada si ay noogu suurta gasho inaan ku hawl galno.
Maya. Uma baahnid caawimo takhasusle " tusaale ahaan, garyaqaanka ganacsiga ama shirkad maareynta cabashooyinka ah. Waxaan eegnaa xaqiiqooyinka aan ka helno cabasho walba " mana raacno sida wanaagsan ee aad u soo gudbinayso kiiskaaga. Waxaan door bidnaa inaan kaa maqalno adiga qawlkaaga.
Haddii aad ku shaqaaleyso qof inuu kuu metalo adiga cabashadaada, adiga ayaa bixinaya kharajkooda. Taasina waxay la macne tahay in lacag aadan dib u heli doonin aad iska bixinaysid.
Garsooruhu rasmi uma ahan sida maxkamadaha oo kale. Waxaan si guud u xallinaa cabashooyinka ku saleysan macluumaadka adiga iyo hay'adda ganacsi aad nagu siisaan, qoraal ahaanta iyo tilfoon soo dirista. Waxaan ku xallinaa cabashooyinka innagoon u baahan in la yeesho kulammo weji-ka-weji ah.
Adeeggayagu kuma kaafin karo haddii cabashaadu gaadho lacag ka badan £100,000 (£150,000 cabashooyinka na soo gaara laga bilaabo 1 Janaayo 2012) " waa taas taan u sheegi karno in hay'adda ganacsi iska bixiso. Waxaad sidoo kale haddii aad door bidaysid geysan kartaa cabashadaada maxkamad haddii aad doonayso in:
laguugu baadho warqadaha oo dhan si shakhsiyadeed
su'aalo kuu gaar ah aad dalbanaysid ama
su'aalo is weydaarsi aad nala sameynayso annaga ama hay'adda ganacsi.
Sida caadiga ah kama hawl geli doonno cabasho horay ay u gashay maxkamadi (ama ficil maxkamdeed sugeysa inuu ku dhaco).
Haa. Waan eegnaa inta badan cabashooyinka ka yimaada meheradaha aadka u yar yar " haddii ay leeyihiin:
dakhli sanadeed ka yar laba milyan oo euros hadana
shaqaalahoodu ka yar yihiin toban shaqaale.
Maya. Taasi waa shaqada jaan-gooyeyaasha, sida Hay'adda Adeegyada Dhaqaale (FSA) iyo Xafiiska Ganacsiga Daacadnimada ah (OFT), inay qorto hadana hubiso in meheraduhu sharciga raacaan.
Shaqadayadu waa inaan xallino cabashooyinka shakhsiga ah ee u dhexeeya meheradaha bixiya adeegyada dhaqaale iyo macaamiishooda.
Xaashida warsidka ahi waa tusmo guud oo qudha. Qawaaniinta aannu raacnaa waxay noqon karaan kuwa adag.
Haddii aad na weydiisatid inaan cabashada eegno, waxaan kuu sheegi doonnaa wixii qawaaniin ah ama xakamaynno ah oo ku imaan kara kiiskaaga.
Waxaan had iyo goor ku siin doonnaa fursad aad aad nagu weydiisan kartid wixii aadan fahmin ama waafaqsaneyn.
qormadaan ku jirta buug-yaraha macaamiisheena waxaa loogu talo galay in laga akhristo shaashadda. Halkii ay ku habboon tahay, waxaa meheradaha looga baahan yahay inay siiyaan macaamiishooda nuqulka adag ee rasmiga ah ee buug-yarahaan (ma ahan daabacaad lagala soo baxay boggaan internetka ah).
macaamiishu qayb la daabacay waxay ka heli karaan tilfoonka ah 0300 123 9 123.
ganacsiyadu waxay ka soo dalban karaan xaashida saad siinta annaga markii ay u doonayaan macaamiishooda.
wax ka qabashada baahidaada iyo ku hadlidda luqaddaada
Waxaan ku soo saari karnaa daabacaadaheenna farta indhooleyaashu wax ku bartaan, daabacaadda farta waaweyn ama cajalad duuban.
Macluumaadka waxaa sidoo kale lagu heli karaa luqado kale oo fara badan.
Xaashida warsidka noo ah ee macaamiisha loogu talo galay waxaa lagu heli karaa akhris fudud qaab ah (qaab qoraal ah oo la adeegsan karo).
khadka caawinaadda macaamisha ee FSA
Haddii aad ka shakisan tahay in shirkaddu aysan raacayn qaanuunka u degsan, la soo xiriir khadka macaamiisha FSA oo ah 0845 606 1234.
isku xirayaasha waxtarka leh
cabasho sameynta - tillaabooyinka koowaad
farriin farsamo: u sheegidda macaamishaada waxa ku saabsan Adeegga Maaliyadeed ee Guddiga Madaxa Bannaan
SU'AALAHA HAD IYO GOOR LAYS - WAYDIIYO - markii loo cabanayo garsoorka